Ahoana ny fomba hanaovana test A / B amin'ny ChangeAgain | Martech Zone
Zoma, Martsa 13, 2015 Douglas Karr
Ny ekipa avy ChangeAgain, fitaovana ho an'ny fitsapana a / b, nanome anay an'ity fitsangatsanganana ity ny fomba fananganana dalambe ho an'ny andrana fitsapana / b izay marina sy azo antoka.
Inona no atao hoe fitsapana A / B?
Fantatra ihany koa fizahana fizahana, ny fanandramana a / b dia manondro kinova roa amin'ny pejin-tranonkala na rindranasa - kinova A sy kinova B. Ny sehatra fitiliana A / B dia ahafahan'ny mpivarotra mampiditra kaody ao amin'ny pejiny ary avy eo mamolavola ireo kinova roa ao amin'ny sehatra fitiliana A / B. Ny sehatra fitsapana A / B dia miantoka ny fisehoan'ny variant tsirairay amin'ny mpitsidika ary Analytics dia omena izay nanaovana tsaratsara kokoa. Matetika, ny fampisehoana dia mifamatotra amin'ny tsindry amin'ny alàlan'ny antso-ho-hetsika.
Ny fizotry ny fametrahana ny fitsapana A / B
Miteraha hypothèse - Ataovy an-tsaina ny lisitr'ireo fehintsoratra 15 momba izay tsy mety amin'ny tranokalanao, inona ny fanomanana sanda tsy mazava, ary ny fiantsoana manao ahoana no tsy miharihary. Ataovy izay laharam-pahamehana amin'ny alàlan'ny fitaomana ny fiovam-ponao sy ny fotoana ilaina amin'ny fampiharana azy. Safidio ny fanandramana izay misy akony amin'ny fiovana ary mila fotoana fohy kokoa hampiharana.
Mametraha tanjona amin'ny fanandramana - Ny fanandramana rehetra dia tokony hampitombo ny metrika sasany amin'ny tranokalanao. Ohatra, raha manana pejy fitobiana ianao - ny fiovana dia tokony hisy fiantraikany amin'ny bokotra fidirana / famandrihana.
Mamorona fiovana - Rehefa nifidy ny hypothèse ianao dia te hanova sy mametraka tanjona azo tratrarina - ampiharo ny fiovaovana. Ny dingana lehibe indrindra amin'io dingana io dia ny fanovana iray monja amin'ny fiovana isan-karazany. Raha nanova ny lohatenin'ny pejin-tranonkala ianao dia aza manova ny lokon'ny bokotra, satria ho sarotra kokoa ny handika ny valin'ny fitsapana. Omeo ny lahasa ho an'ny mpamorona sy ny mpamorona hanomanana fiovaovana.
Mandrosoa ny fanandramana - Matetika, io dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fametahana ny kaody avy amin'ny andrana A / B ao amin'ny rafitry ny fitantanana atiny ary ahafahana manao ilay fanandramana. Aza hadino ny manandrana ny pejinao hahazoana antoka fa navoaka ny fitsapana rehefa notsapaina.
Diniho ny fanandramana mandritra ny fotoana na fitsidihana maromaro izay ahazoanao antoka fa ny farany Analytics ho ara-statistika. Ny tapa-bolana dia fenitra tsara ho an'ny tranokala misy fiovam-po 100 isan'andro. Raha tsy mandray fiovam-po ianao dia te hiandry ela kokoa.
Safidio ny mpandresy miorina amin'ny valiny statistika marina. Tsy fantatrao izay statistika manan-kery? Ampiasao ny Fitsapana manan-danja A / B avy amin'ny KISSmetrics.
Ampiharo ny fanovana mandresy amin'ny tranokalanao. Esory ny kaody fitsapana A / B ary soloinao ilay variant mandresy amin'ny fitsapana A / B.
Manomboka amin'ny # 1 hanazavana bebe kokoa ny valiny na hanombohana fitsapana hafa.
Ny fitsapana A / B dia dingana tsy manam-petra; tokony ho azonao atao ny mampiakatra ny taham-panovana anao in-3 ka hatramin'ny 5 amin'ny alàlan'ny fitsapana samihafa. Tsy ny andrana rehetra no hahomby, fa rehefa tonga kosa, dia fomba tsara iray hanamafisana ny fahombiazan'ny tranokalanao.
Momba ny sehatra fitsapana A / B an'ny ChangeAgain
ChangeAgain dia manolotra sehatra iray vidiana amin'ny isan'ny fanandramana anananao fa tsy miorina amin'ny fiheverana ny tranokalanao - tena manampy tokoa satria ny tranokala be dia be dia mety lafo be mba hosedraina. Misy koa izy ireo mampiavaka endri-javatra, toy ny fahaizana mampifanaraka tanjona amin'ny Google Analytics sy mpamoaka sary izay tsy mila traikefa amin'ny kaody.
Tags: ab testingfanovanaGoogle Analyticstanjon'ny analytics googlefanandramana google analyticsinona ny fanandramana ab